Nyanzvi dzeZveupfumi Dzinoti Hurumende Haina Mari Dzairi Kuvimbisa Vashandi Vayo
Vamwe vashandi vehurumende vatotanga kare kuramba kutambira zvikamu zvemari zvinonzi nehurumende inokwanisa kuwedzera nazvo mihoro yevashandi vayo.
Masangano evarairidzi ari pasi pemubatanidzwa weFederation of Zimbabwe Educators Union, FOZEU, asangana muHarare akaramba zviri kuda kupiwa nehurumende izvi, achiti anoda kuti vapiwe zvikamu zana kubva muzana, kana kuti murairidzi ari pasi otambira mari inoenderana nePoverty Datum Line, iyo vararaidzi vanoti iri pamadhora mazana manomwe nemakumi maviri pamwedzi.
Hurumende neMuvhuro yakazivisa kuti yakwidza zvikamu zvainokwanisa nazvo kubhadhara vashandi vayo kubva pazvikamu gumi kubva muzana, izvo zvakarambwa kare nevashandi, kuenda pazvikamu gumi nezvishanu kubva muzana.
Mutungamiri werimwe remasangano ari muFOZEU, reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, VaObert Msaraure, vanoti havasi kuzopedza nguva vachipembedza zvinhu zvisina maturo zvakaita sezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana.
Mashoko aVaMasaraure aya anotsinhirwawo nemutungamiri we Progressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, VaTakavafira Zhou, avo vanoti zvinorwadza kuti hurumende iri kukwanisa kuwedzera mari dzekumihoro kune vamwe vashandi vayo vakaita savanachiremba navanamukoti panguva, asi ichiomera kubhadhara varairidzi.
Hurumende inonzi yakatobhadhara kare vanachiremba navanamukoti mari dzemabhonasi egore rapera, uye vanamukoti vanonzi vakapiwa dzimwe mari dzavo dzemisaridzirwa dzavakanga vasina kupiwa mumakore adarika. Varairidzi vanonzi vari kutarisirwawo kuwana mabhonasi avo egore rapera svondo rinouya.
Panyaya yekuti kune mamwe masangano evashandi vehurumende anonzi ari kutambira zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana izvi, VaMasaraure vanoti vanozviziva kuti hurumende ine masangano evashandi ainoshanda nawo kuitira kukanganisa mafambiro enhaurirano dzemihoro yevashandi vehurumende.
Vanoti havaoni svondo rino richipera nhengo dzavo dzisati dzaratidzira dzichinyunyuta nekunonoka kwehurumende kunzwa zvichemo zvavo, vachiti kana nhaurirano dzakasaburitsa chimuko varairidzi vacharamwa mabasa.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Doctor Prosper Chitambara, vanoti idanho rakanaka chose kuti hurumende iwedzere vashandi vayo mihoro, asi vanoti nemamiriro akaita zvinhu mune zveupfumi, havaoni hurumende ichizokwanisa kuenderera mberi ichiwana mari dzekutambirisa vashandi vayo.
VaChitambara vanoti igaroziva kuti nguva yesarudzo yose mari dzinoshandiswa nehurumende dzinokwira zvikuru nekuda kwekuti inenge ichibhadhara zvinhu zvainenge isina kugadzirira asi nekuda kwekuti inenge ichitsvaga mavhoti, inpedzisira yazviisa paisingakwanisi kuzobuda.
VaChitambara vanoti nekuda kwekuti nyika haisi kukwanisa kuwana mari yekunze, zvichanetsa kuti hurumende iwane mari dzekuzoramba ichibhadhara vashandi vayo paine nguva.